Aqoonyahan Islaamka ayaa sheegay Seeraar waafaqsaneyn sharciga shareecada - Blockchain News
Aqoonyahan Islaamka ayaa sheegay Seeraar waafaqsaneyn sharciga shareecada
dhawaaqo dhawaan A by ah caalim diinta Islaamka in Seeraar waafaqsaneyn Shareecada noqon kartaa sababta ka dambeysa maanta $1000 qiimaha ay bateen, suuqa furan in ay maal-Muslim ahaa oo hore u hubin haddii cryptocurrency ku baxday lacag ka yar Shareecada.
Seeraar hoos qeexitaan qaar ka mid ah lacag in Shareecada - wax noqdo wada oggolaaday sidii lacagta by bulshada ama loo igmaday Dowladda.
Mufti Muhammad Abu Bakar, taliye Shareecada iyo sarkaal waafaqsan at Blossom Maaliyadda ee Jakarta, la daabacay xukun warqad ah in mararka qaarkood, Seeraar runtii waxay noqon kartaa Xalaal (ogol yahay).
hoostana aad ka akhrisan:
"In Germany, Seeraar la aqoonsan yahay sida lacagta sharci ah oo sidaas daraaddeed qalma in uu noqdo lacag Islaamiga ah ee Germany. In dalalka sida Mareykanka, Seeraar lahayn xaaladda rasmiga ah ee lacagta sharciga ah laakiin la aqbalo bixinta ee kala duwan oo ka mid ah baayacmushtariyaasha, oo sidaas daraaddeed qalma in uu noqdo lacag caado Islaamka. "
Intaas waxaa sii dheer, Seeraar iyo technology blockchain si fiican u waafajiyaan la fikirka shareecada. bangiyada reserve jajab, halkaas oo lahaanshaha lacagta ku lugta leh waa natiijada ah “amaah xumo” (Ribada) waa mamnuuc. Maxaa yeelay, blockchain raacsan daliil u lahaanshaha, waxa run ahaantii waa ka badan waafaqsaneyn Shareecada badan bangiyada, oo taas waxaa loo dhan waxaa ka mid ah in wargeyska uu daabacay Mufti Muhammad Abu Bakar.
maal-crypto Japanese ilaa laga yaabaa in ay 55% canshuur macaashka
Japan ayaa Tax Qaranka ...
jaangooyaha The Australian siiyey crypto-is-weydaarsiga lix bilood ah si ay u dhamaystiraan diiwaangelinta
Sida laga soo xigtay dir ah ...
Shirkadda casriga Canadian iibsanayaa shirkadda macdanta cryptocurrency
Post Previous:Baidu bilawday madal photo stock blockchain ku salaysan
Post Next:sarrifka crypto Indian Coinsecure jabsaday